Nin iyo haweeney u shaqaynaayay Hay’adda UNHCR oo galabta lagu dilay Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Nin iyo haweeney u shaqaynaayay Hay’adda UNHCR oo galabta lagu dilay Magaalada Muqdisho
Laba qof oo ka tirsanaa Hay’adda UNHCR, ayaa waxaa galabta lagu dilay xaafadda Siigaale, oo ka tirsan Degmada Hodan Ee Bartamaha Magaalada Muqdisho.
Xubnahan oo watay gaari nooca raaxada ah, ayaa waxaa lagu horgeeyay gaari kale, dabadeed waxaa oodda looga qaaday oo la huwiyay rasaas xoogan.
Dembiilayaasha, ayaa waxay ku baxsadeen gaarigii ay wateen, waxaana daqiiqado ka dib halkaasi gaaray Ciidamada Nabad Suggida & Booliska Gobolka Banaadir.
Ciidamada Dowladda oo hawlgal ka sameeyay aaggaasi, ayaa waxaan jirin cid ay u soo qab qabteen fal dembiyeedkaasi,oo muddooyinkii ugu dambeysay uu noociisaan ka dhacaayay Caasimadda.
Wax sahlan maaha in durbaba gacanta lagu soo dhigo rag dilal ka gaystay Magaalada Muqdisho, waxaana Ciidamada Dowladda looga bartay inay markasta ku fashilmaan soo qabashada dembiilayaasha.
Fal dembiyeedka oo ah ka hortag iyo ka daba tag, ayaa waxaa mararka qaarkood dhacda in ka daba tag ay sameeyaan CIidamada Dowladda, ay ku soo qab qabtaan xubno ka tirsan mintidiinta Al Shabaab, oo lagu toogtay/qisaasay Magaalada Muqdisho.
Saraakiisha ammaanka ee Magaalada Muqdisho, ayaan illaa iyo hadda ka hadlin labada qof ee gelinkii dambe, ee maanta lagu qaarajiyay Degmada Hodan.
Tacabka bariiska oo dib uga bilowday degmada Jowhar ee xarunta shabeelada dhexe
Dowladda Somaliya oo u dabaaldegtay 55 guurada ka soo wareegatay xiriirka kala dhaxeeya Shiinaha